२४ घण्टा नवित्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा कु’ट्ने र कु’टाई खाने भाइरल दमकका यी ग्याङ मिडियामा! (भिडियो हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > २४ घण्टा नवित्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा कु’ट्ने र कु’टाई खाने भाइरल दमकका यी ग्याङ मिडियामा! (भिडियो हेर्नुस्
२४ घण्टा नवित्दै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा कु’ट्ने र कु’टाई खाने भाइरल दमकका यी ग्याङ मिडियामा! (भिडियो हेर्नुस्
admin February 9, 2020 February 9, 2020 Uncategorized	0
केहि दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा कु’टाई खाएर भाइरल भएकि नानी मलाई मा’र्ने अझै कोसिस गर्दैछन रे भनेपछि पहिलोपटक मिडियामा ल्याएकि प्रजिताले उनिहरूलाई पनि भेटेर यथार्थ बुझ्न पर्ने वा प्रहरीलाई खबर गरेर रेविकाकाे सुरक्षा गर्नु पर्ने भएपछि ती ग्याङहरूसँग भेटिन् र उनिहरूलाई आइन्दा यस्ता नराम्रो काम र कु’लतबाट निकाल्नका लागि केहि सकरात्मक पहल गरेकिछिन । यस्तो राम्रो पहलका लागि प्रजितालाई धन्यवाद ।
साधारण कुराहरूमा यसरी झ’गडा परेपछि यिनीहरूले साथी नै चिनेनन् । एकआपसमा झ’गडा गरेर हिडेका उनिहरूले घरमा अभिभावकहरूकाे कस्तो अवस्था होलासम्म सोचेनन् । काठमाण्डाैमा ८ कक्षा सम्म पढेर दमक गएकि सम्झना परियार साथीहरूकाे लहलहैमा लागेर बुवा आमालाई समेत नटेर्ने भइन । तर उनकै बुवा आमा उनकाे मायामा यतिसम् पागल छन् कि सम्झनाकि आमाकाे आँखामा आँशु नै थामिएन । भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुहाला ।
एक जना समर्थक लेख्छन् – नानु दोस्ती हैन तिनीहरु दुस्मन हो दोस्ती सम्झेर न छोड! के थाहा? तिम्रो कुरा अनुसार त फेरि पनि तेई घट्ना दोहोरिन सक्छ भनिरहेछौ ! तिम्ले कुटाई खादा तिमी जिउदै रहन्छाै भन्ने लाग्या थिएन । त्यसैले कार्बाहिको माग गरेकोथ्यो कमेन्ट गरेर नै पैल्स्स्को भिडियोमा तर तिमी साथी जोगाउदैछौ हुनु त तिम्रो त्यो माहानता हो मानव रुपि मन हो ।
तर त्यो सेल्फी लिदै कुट्नेको मन दानवकाे छ बुझेउ त्यसैले माैका नदेउ र अर्को नानु अब सुध्रिने माैका छ । राम्राे संग सुध्रिदैनन् हाेला ल बुनु । ईन्टरभ्यु लिने बहिनीलाई सेलुट गर्न चाहान्छु सिस। वाह हजुरको ठूलो मन हुनु हुदो रैछ जुन कुरा ले दिल छोयो हजुर्को सदा सु कर्म र सदा दिर्घायुको कामना गर्दछु धन्यबाद ।
ढुक्क हुनुस् एमसीसी पास हुन्छ भन्दै राजनैतिक बिश्लेषक सुरेन्द्र केसीले बिजय कुमार गच्छदारबार यसो भने… (भिडियो हेर्नुस्)
आज शनिबार, शनीदेवलाई यसरी खुशी पार्नुहोस्, सबै रोकिएका काम बन्नेछ्न् !
काठमाडौंबाट उदयपुर जाँदै गरेको बस बर्दिबासमा दुर्घटना, सह–चालकको घटनास्थलमै मृत्यु
सावित्री काण्ड: छोरीले आमा मा*र्नुको खुल्यो फेरी अर्को घिन लाग्दो रहस्य !, आखिर बास्तविकता यहि हो त?